Iinkcukacha zoqhagamshelwano – Ernest Bevin College
Inqununu: Ms Tracy Dohel
Umnxeba: 020 8672 8582
Imibuzo kunye nezicelo zotyelelo mazibhekiswe kuzo
Umnxeba: 0208 672 8582
Nceda unxibelelane nekholeji ukuba ungathanda ukucela iikopi zamaphepha alo naluphi na ulwazi olupapashwe kwiwebhusayithi yasekholejini.
Usekela Nqununu: Nks N. Patel
Banokuqhagamshelwa kwikholeji malunga 0208 672 8582. Ngolwazi oluthe kratya malunga nokunikezela nge-SEND kwikholeji yasekholejini Apha
Iindlela 155, 219, 249, 319, 355, 690 Bonke badlula kufutshane nekholeji.
Ngolwazi oluthe kratya cofa kwikhonkco kwiwebhusayithi ye-TFL apha ngezantsi (Uya kudinga ukufaka ikhowudi yethu yeposi ye-SW17 7DF)
Sihamba umgama omfutshane ukusuka kwindawo yokuya kwisikhululo se-Tooting Bec.
Imikhombandlela yokuhamba ukusuka ku-Tooting Bec:
Phuma kwisikhululo esiya ku-Utatu, jika ngasekunene kwaye uhambe ngendlela ka-Tixo, uwele ngaphesheya kwindlela yokuhamba ngeenyawo ngu-Trinity Road / M&Igaraji. Thatha eyokuqala ekhohlo kwiGlenburnie Road edlula ngendlela entsha & ikhefi, then first right into Langroyd Road. Landela le ndlela ujikeleze ibhekile yasekhohlo (iba nguBrenda Road).
Ekupheleni kweBrenda Road ujongene neKholeji yase-Ernest Bevin. Sebenzisa indlela yokuhamba ngeenyawo kwaye ujike ekunene ekungeneni main okanye ekhohlo ukuze ungene kwiziko lezemidlalo kwipaki yemoto (ngokuhlwa & ngamalungiselelo kuphela).